बिरालो हरायो, भेट्टाउनेलाई साढे १७ हजार पुरस्कार ! | साँचो खबर
बिरालो हरायो, भेट्टाउनेलाई साढे १७ हजार पुरस्कार !
होमपेज / रोचक खबर
१४५ पटक पढिएको
काठमाडौं। निर्वाचन आयोगकी पूर्व आयुक्त इला शर्माको बिरालो हराएको छ। आयुक्त शर्मा गएको बुधबार नेपालबाट दिल्ली जाने क्रममा उनको बिरालो गोरखपुर रेलवे स्टेशनमा हराएको हो। पूर्व आयुक्त शर्माले दिल्ली जाने क्रममा बिरालो साथमा लिएर गएकी थिइन् । बिरालो हराएपछि गोरखपुर रेलवे प्रशासनले बिरालाको खोजीको धेरै प्रयास गरेको तर बिरालो नभेटिएको भारतीय दैनिक अखबार हिन्दूस्तानले जनाएको छ ।
रेलवे पुलिसका इन्स्पेक्टरले हिन्दूस्तान दैनिकसँग कुरा गर्दै बिरालोको खोजी भइरहेको बताएका छन् । २०६९ साल देखि २०७५ सम्म ६ वर्ष नेपालकी निर्वाचन आयुक्त रहेकी ईला शर्माको भारतीय नागरिकसँग विवाह भएको हो । उनका श्रीमान एसवाइ कुरैशी पनि भारतका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन् । ईला शर्मा बुधबार नेपालबाट गोरखपुर पुगेकी थिइन् ।
यहाँबाट उनी रेलमा दिल्ली जानुपर्ने थियो तर जंक्सनको प्लेटफर्म नम्बर ६ बाट उनको बिरालो हरायो । बिरालोको नाम हिवर रहेको बताइएको छ । बिरालो हराएपछि निकै भावुक भएकी पूर्व आयुक्त शर्माले तत्कालै बिरालोको फोटोसहितको पोस्टर बनाएर गोरख पुर रेलवे स्टेशनका विभिन्न ठाउँमा टाँसिन् । पोस्टरमा मोवाइल नम्बरका साथै बिरालो भेट्टाउनेलाई ११ हजार भारु पुरस्कारको घोषणा गरिएको छ ।
पूर्व आयुक्त शर्माको बिरालो खोज्नको लागि जीआरपी र आरपीएफका जवानहरुले रातभरी प्रयास गरेका थिए । आरपीएफ इन्स्पेक्टर राजेश सिन्हाले बिरालोको खोजी भइरहेको बताएका छन् । पूर्व आयुक्त शर्मा र उनका छोराछोरी बिरालो हराए पछि निकै चिन्तित छन् । शर्माले बिरालो हराएको उजुरी पुलिसमा दर्ता गराएकी छिन् ।
शर्माका अनुसार उनको पूरै परिवारले हिवर नामको बिरालोलाई निकै प्रेम गर्छन। यो बिरालो वन विभागबाट प्रतिबन्धित नभएको बताउँदै शर्माले आफूले राखेको ११ हजार रुपैयाँको पुरस्कार निकै कम भएको र यसको लागि अझै ठूलो पुरस्कारको घोषणा गर्न सक्ने बताएकी छिन् । बिरालो भेटिएको वा नभेटिएको बारे थप जानकारी प्राप्त भएको छैन ।
यी २३ वर्षीया युवतीले कसरि घटाइन ८८ किलो तौल ?
अमेरिकाको उटाह राज्यको दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टर पाइलटले ‘अद्भूत’ मोनोलिथ भेट्टाए
जब यी प्लेब्वायले ६ गर्भवती महिलाको बच्‍चाको बाबु आफैँ भएको दावी गरे…
३२ लाख मूल्यका १४ वटा आइफोन लिएर डेलिभरी ब्वाय भागे, आफ्नै गल्तीले समातिए
१२ घन्टामा ९१९ पुरुषसँग सम्बन्ध
महिलालाई पुलिसमा भर्ती गर्दा कुमारित्व परीक्षण !